SCG Building Materials -SCG Easy Grass တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကော် 1.2 kg.
SCG Easy Grass တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကော် 1.2 kg.
အလေးချိန်: 1.2 (kg)
အလေးချိန် : 1.2 kg
ဥယျာဉ်ငယ်၊ဂေါက်ကွင်း၊ကစားကွင်းအစရှိသောနေရာအမျိုးမျိုးတွင်အလှဆင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သောလှပသည့်မြက်ခင်း။ပိုလီအီသလင်းကနေနူးညံ့တဲ့ဖိုင်ဘာအမျှင်လေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပြီးအောက်ခံပြားပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန်တွယ်ကပ်လိုက်သည်။သဘာဝနှင့်တူအောင်ဖန်တီးထားသောဒီဇိုင်း နှင့် ရှည်လျားသောသက်တမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နေဒဏ်၊မိုးဒဏ်ခံနိုင်၍ရေငွေ့အစိုပြန်ခြင်းကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
4. မြက်ခင်းတု၏အဆုံးသတ်အနားများတွင် Seaming tape အသုံးပြု၍ဆက်ရမည်။Seaming tape နှင့်ဆက်ပြီးလျှင်လက်ကိုသာအသုံးပြု၍အချောသတ်ပေးပါ။
5.မြက်ခင်းတုများဆက်ရာတွင်မြက်ပင်လေးများ၏လားရာထပ်တူကြပါစေ။မြက်ခင်းတုကို Seaming tape ကော်သုတ်ပြီးပြန်ကပ်ပါ။ခြောက်သွေ့ရန်မိနစ်၂၀ ခန့်ထားပါ။